I-Gum Leaf Cabin. I-Carawirry Forest Escape.
Sizungezwe uhlaza olukhazimulayo, amakhabethe ethu ogodo asanda kulungiswa, agqugquzelwe yi-treehouse, anogodo oluqinile aluhlaza ngaphandle, kodwa aklanywe kahle ngezinto zangaphakathi zamanje. I-charm yehlane lomhlaba wakudala ihlangabezana nokunethezeka okuncane, ngokugxila ekufakweni okusimeme kanye nokunethezeka kwesimanje. Indawo yokuphumula, ukuphumula kanye nokuvuselela; indawo yokuphumula enezindawo ezivulekile nomoya omusha; izihlahla nokuthula. Sikumema ukuthi unqamule emhlabeni futhi uxhumane nawe kabusha.
Ezweni eligcwele umsindo neziphazamiso ezingapheli, iCarawirry izimele njengendawo engcwele yokuthula, ukuba yodwa nokuthula.
Ibekwe phakathi kwamahektha angama-250 ehlathi lezinkuni eliqinile lase-Australia elinamaphakethe ehlathi elinemvula elipholile nezingodo ezindala, imifudlana nezimpophoma ngezikhathi ezithile, imigodi yokubhukuda yamanzi ahlanzekile, namagquma amahle anokubukwa kwezintaba eziphakeme ezihlahleni okuzokushiya uphelelwa umoya (kodwa ngenxa yezizathu ezifanele. ), i-Carawirry iyindlela yokuphunyuka ngokungafani nezinye.
Ukuqwala izintaba, izindlela zemvelo, ukubhukuda, i-geocaching, ukuhamba ehlathini, ukubona izilwane, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukugijima umzila, ukudoba, noma ukubuka izinyoni - noma ngabe ufisa ukuhlola nokusebenzisana nemvelo, uqinisekile ukuyithola lapha e-Carawirry. Noma, kulabo abakhetha ukuphumula nokuzipholela endlini, singahlela isifundo se-yoga yokubuyisela esimweni esiseduze noma ukubhucungwa kwe-massage ekuzithekeni kwekhabethe lakho.
I-Gum Leaf Cabin
Ibekwe eduze kweCarawirry Creek onqenqemeni lwephakethe elikhulu lendawo lehlathi elinemvula elipholile, iGum Leaf Cabin iyindawo ekahle yokubalekela yalabo abafuna uhambo lwangempela lwasehlane.
Njengoba ukulungiswa okubanzi kuqediwe ngoSepthemba 2017, iGum Leaf Cabin inamakamelo okulala amathathu (3) akhethwe kahle, ovulandi abambaxambili, amapulangwe endabuko aphansi, indawo yomlilo yangaphakathi, nezindawo zokulala nezokungcebeleka ezansi, ezinezindawo zokudlela nezokungcebeleka ezitholakala phezulu, ezibekwe phakathi. iziqongo zezihlahla. Amakamelo okulala 1 kanye no-2 ngalinye lihlanganisa umbhede wendlovukazi kanye nokubukwa kwehlathi lemvula okungaphazamiseki, ne-Bedroom 3 enombhede owodwa wenkosi endaweni ethokomele, efana ne-nook - ilungele abancane abahamba ngezinyawo!
Iphelele ngokunethezeka kwesimanje kanye nokunethezeka nokufakwe ngaphansi, le ndlu yangasese ilala izivakashi ezingafika kweziyisihlanu (5) futhi ilungele amaqembu amancane noma imindeni efuna indawo enethezekile kodwa ebanzi ukuze ujabulele ukuba ndawonye.
• Amakamelo okulala angu-3 anemibhede emi-3
• Ikhishi eligcwele lokuzijabulisa elinazo zonke izinto zesimanje nezinto eziyisisekelo ze-pantry
• Igumbi lokugezela elisha elinamashawa aphindwe kabili
• Indawo ebanzi yokuhlala nezindawo zokuzijabulisa ezinomabonakude ohlakaniphile we-LCD kanye nesidlali seDVD se-Blu-Ray
• Ovulandi abagoqelwe kabili, abaphelele nge-BBQ yegesi yangaphandle
• Indawo yokubasa yasendlini, igcwele izinkuni, ukubasa nomentshisi
•	Umshini ongenisa umoya
• Indawo yokubasa ngaphandle enezinkuni
• Isipikha se-Bluetooth esiphathwayo
• Umshini wekhofi we-Nespresso
• Izinto zokugeza ze-Botanical Botanical Skincare zase-Wallawa
• Kuhlinzekwe yonke ilineni, izingubo zokulala, imicamelo namathawula
Uyamenywa ukuthi unqamule emhlabeni futhi uxhumane nawe kabusha.
Ibekwe phakathi kwamahektha angu-250 ehlathi lezinkuni eliqinile lase-Australia elinamaphakethe ehlathi elinemvula elipholile nezingodo ezindala, imifudlana nezimpophoma ngezikhathi ezithile, imigodi yokubhukuda yamanzi ahlanzekile, namagquma amahle anokubukwa kwezintaba eziphakeme ezihlahleni okuzokushiya uphelelwa umoya (ngenxa yazo zonke izizathu ezifanele) , I-Carawirry iyindlela yokuphunyuka ngokungafani nezinye.
Iphethwe futhi iqhutshwa uJohn noHeather Watkins, iCarawirry iyindawo yokuphumula, ukuphumula nokuvuselela kabusha; indawo yokuphumula enezindawo ezivulekile nomoya omusha; kwezihlahla nokuthula.
Kwa-Carawirry, simema izihambeli zethu ukuthi zibe abaklami bohambo lwazo futhi zilandele ilukuluku lazo, noma yikuphi lapho lingabaholela khona.
Idume ngezintaba zayo ezimangalisayo, amahlathi aminyene, namadolobhana angasogwini lomfula, futhi etholakala enhliziyweni enamaqabunga eSifunda sase-NSW Hunter, iCarawirry ilele ezansi kweBarrington Tops National Park ezungezile, futhi ibanga nje elifushane ukusuka elokishini elihle laseDungog Shire. .
Njengoba kunemicimbi eminingi nemisebenzi eyenzekayo endaweni, awusoze waba nesithukuthezi. Kungakhathaliseki ukuthi ungumuntu othanda umlando, othanda imvelo, umzingeli wasendulo, umuntu othanda ubuciko, i-foodie enelukuluku noma umthandi wobhiya wezandla, uzothola okuthile okuzokukitaza okuthakazelisayo entanyeni yethu yehlathi.
I-Dungog ngokwayo izishaya isifuba - amathilomu amane abukekayo kanye nebhikawozi lendawo, izindawo zokucima ukoma ezigcwele izinhlamvu ezintathu, izitsha neklabhu ye-RSL, i-quirky pizzeria kanye ne-microbrewery elungele intambama yokuphumula.
I-Dungog futhi inezitolo zasendulo, igalari yezobuciko, isitolo esikhulu se-IGA, isitolo sezithelo kanye neJames Theatre, icinema enhle endala edume ngokuba yisinema endala eqhubekayo egijima e-Australia.
NgeMigqibelo ekuseni imakethe yabalimi bendawo esakhiweni se-CWA iyindawo ekahle yokuthenga umkhiqizo oshibhile, omusha, otshalwe endaweni okuhlanganisa nenhlama emuncu namakhekhe e-Fosterton Biodynamic Farm.
Siyaluthanda ucezu lwethu oluncane lwehlathi lase-Australia, futhi siyaziqhenya ngokusinikeza ithuba lokubaleka elizolile njengezinye. Akukho okusijabulisa ngaphezu kokwenza umuntu ngamunye okuhlangenwe nakho kwe-Carawirry ezivakashini zethu futhi sibonise ubuhle bokuphunyuka kwehlathi lethu eliyingqayizivele.
Uma unemibuzo, imibuzo, noma ungathanda ukwenza ngendlela oyifisayo ukuhlala kwakho e-Carawirry nganoma iyiphi indlela, sicela uthinte.
Ngitholakala nge-imeyili kanye neselula ukuze ngiphendule noma yimiphi imibuzo futhi ngilungise noma yiziphi izinkinga. Angihlali kule ndawo. Uma kudingeka ngingaba khona ukuze ngisize phakathi nemizuzu engu-30.
Siyaluthanda ucezu lwethu oluncane lwehlathi lase-Australia, futhi siyaziqhenya ngokusinikeza ithuba lokubaleka elizolile njengezinye. Akukho okusijabulisa ngaphezu kokwenza umuntu…
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$359.